China Diesel Hydraulic Material Handler WZY43-8C ndị na-emepụta na ndị na-ebubata ya |Bonny
Onye njikwa ihe eji eme mmanụ dizel WZY43-8C
6. WZY43-8C kwesịrị ekwesị maka nbudata na nbudata, ikpokọta, transshipment na nkwakọ ngwaahịa nke ahịhịa nchara, ogige wharf, ogige ụgbọ oloko, ọgwụgwọ mkpofu na ụlọ ọrụ ọkụ.
7. The diesel engine emissions nke WZY43-8C na-erubere ọhụrụ gburugburu ebe obibi ụkpụrụ, engine nwekwara ike họrọ dị ka ndị ahịa chọrọ na mpaghara mmanụ ụgbọala nkọwa.WZY43-8C nwere akụrụngwa hydraulic ama ama ama n'ụwa niile.
8. WZY43-8C nwere ọrụ nhọrọ dịgasị iche iche, nke nwere ike izute onye ahịa nke ọma.Gụnyere: ụgbọ elu na-ebuli elu, ụgbọ ala kwụ ọtọ, usoro onyunyo vidiyo / ihe ngosi, sistemu igwe eletrọnịkị, sistemu nchọpụta radieshon, sistemu mmanu mmanu akpaka, egwu rọba, wdg.
9. Uru nke ngwaọrụ na-arụ ọrụ: BONNY ihe eji eme ihe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-eme ka oghere oghere na ihe nkedo welded, ngwaọrụ na-arụ ọrụ na-esiwanye ike, a na-ewepụkwa ebe mgbakasị ahụ;nhazi nke cylinder mkpisi okpukpu abụọ na imewe ike nke ebe nkwado osisi ahụ, ike na-ebu ya na-emeziwanye, ike na-eguzogide torsion ma kwụsie ike.
10. Uru nke sistemu hydraulic: Onye na-ahụ maka ihe BONY na-anabata usoro hydraulic nke nfuli okpukpu abụọ na sekit abụọ iji kesaa ike nke isi iyi nke ọma n'ụzọ ziri ezi, ma na-edozi mmepụta ike nke usoro ahụ dịka ibu ahụ si dị, ma na-arụkọ ọrụ pụrụ iche. valvụ multi-way iji nweta arụmọrụ dị elu nke ọrụ, ma ghọta oke nchekwa ike n'otu oge.
WZY43-8C bụ onye na-ahụ maka mmanụ dizel nwere tọn 43 nke BONNY.Onye na-ahụ maka ihe BONY bụ ngwa ọrụ pụrụ iche dị elu maka nbudata na nbudata.Emebere ya nke ọma maka ọnọdụ nbudata na ibutu.tumadi na-agụnye: njikarịcha nhazi nke ngwaọrụ na-arụ ọrụ na igwe dum, njikarịcha nke usoro hydraulic, njikarịcha nke undercarriage na nguzozi, wdg, ọ bụghị mgbanwe dị mfe nke ndị na-egwupụta ihe.
Ibu igwe t 43
Ike injin dizel kW 179
Enyere ọsọ ọsọ rpm 2000
Oke.eruba L/min 2 × 280
Ọsọ ọsọ rpm 8.6
Ọsọ njem km/h 3.0 / 4.9
Ogologo ọganihu mm 8200
Ogologo osisi mm 6000
Ike na njide multi-tine m3 1.0 (ọkara-mmechi) / 1.2 (ụdị mepere emepe)
Oke.ijide iru mm 15330
Oke.ijide elu mm 12838
Oke.njide omimi mm 7128
1.Kedu maka ọrụ ahịa nke WZY43-8C?
Ka ọ dị ugbu a, ọrụ ahịa nke ndị na-ahụ maka ihe onwunwe China BONNY karịrị 70%, karịsịa na ụlọ ọrụ nchara.N'ime ụdị njikwa ihe niile, WZY43-8C bụ nhọrọ mbụ nke ọtụtụ ndị ahịa.
2.Olee otú m ga-esi ahọrọ ihe nlereanya nke onye na-ahụ maka ihe onwunwe?
Enwere ajụjụ 4 dị oke mkpa ị ga-ebu ụzọ tụlee: Kedu ihe a ga-ejide?Kedu ihe achọrọ ịrụ ọrụ nke ọma?Gịnị bụ oke ọrụ achọrọ/anya?Kedu oke oke nke saịtị maka onye grabber?Mgbe ị ghọtara ozi ahụ, biko kpọtụrụ anyị ma anyị ga-akwado gị ihe nlereanya kwesịrị ekwesị.
N'ezie, ị nwekwara ike ịhọrọ site n'ịmara ụdị ndị ejirila na saịtị ndị yiri ya.Nke ahụ bụ usoro dịtụ mfe.
3.Olee otú a ga-esi ebuga WZY43-8C?
N'ozuzu, anyị ga-agbaso usoro nke ịkwasa ụgbọ njem, nke na-akawanye mma maka njem ụgbọ mmiri.N'ezie, ọ bụrụ na ọnọdụ kwenye, anyị nwekwara ike iji ụgbọ njem igwe dum, nke nwere ike ibelata nrụnye.
4.Ọ bụrụ na WZY43-8C kwesịrị ka etinye ya, onye ga-ahụ maka ya?
Tupu oria ojoo COVID-19, BONY na-eme nrụnye mgbe niile, ọ bụkwa n'efu;ugbu a, ọ bụrụ na ndị installers anyị nwere ike iru ebe ahụ, nke a ka dị, ma ọ bụrụ na onye nrụnye enweghị ike iru, onye ahịa kwesịrị ime ya.BONNY ga-enye ozi nwụnye zuru ezu, ma hazie ndị injinia ka ha duzie n'ịntanetị.
5. Ogologo oge ole ka enwere ike iji grabber mee ihe?
N'okpuru otu usoro njikwa mma, ndụ ọrụ nke igwe bụ n'ihi ike ọrụ, mmezi ziri ezi na ojiji.Onye na-ahụ maka ihe BONY nke ka na-arụ ọrụ bụ n'afọ 2001.
Nke gara aga: Onye njikwa ihe eji eme mmanụ dizel WZY42-8C
Osote: Onye njikwa ihe eji eme mmanụ dizel WZY48-8C
Onye njikwa ihe eji eme mmanụ dizel WZY48-8C
Onye njikwa ihe eji eme mmanụ dizel WZY18-8C
Onye njikwa ihe eji eme mmanụ dizel WZY28-8C